बाल विकासका शिक्षकको तलब मात्र ६ हजार ! – newslinesnepal
बाल विकासका शिक्षकको तलब मात्र ६ हजार !
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७५, मंगलवार ०३:०८
काठमाडौँ – तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । मासिक ६ हजारमा बाल बिकाशका शिक्षक शिक्षिकाहरु मासिक ६ हजारमा पढाईरहेका छन् । बाल विकास कार्यक्रम (मन्टेश्वरी) तर्फ देशभर ३६ हजार ५ सय ९३ शिक्षक शिक्षिका पढाईरहेका छन् । विगत दुई दशक देखि सञ्चालित कार्यक्रमका शिक्षक तलब मात्र पाँच सय रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो । हाल उनीहरुले मासिक ६ हजार पाउँदै आएका छन् । तर सरकारले तोकिएको पछिल्लो तलब अनुसार प्रा.वि/नि.मा.वि/ मा.वि स्तरका सरकारी कर्मचारीको तलब स्केल न्यूनतम २३ हजार तोकिएको छ ।
यसरी तलबमा विभेद भएको भन्दै बाल विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका शिक्षकहरू आफ्नो हक–अधिकार लागि सङ्घर्षमा उत्रिन वाध्य भएको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रम सरकारले २०५३÷०५४ मा ल्याएको थियो । यस अवधारण अन्तर्गत विपन्न वर्गका ३ देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरू लाई स्कुल जान अभिप्रेरित गरिन्छ । यो एक प्रकारको मन्टेश्वरी कार्यक्रम हो । शिक्षामा प्रत्यक्ष आवद्य हुन नसकेका साना नानीहरूलाई खेलाउने , भुलाउने र पाँच वर्ष पछि स्कुल जान मानसिक रूपमा तैयार पारिन्छ । कार्यक्रममा आवद्य रहेका हजारौँ शिक्षकहरूले सरकारी निकायको यस तर्फका शिक्षकको न्यूनतम तलब सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने माग राखी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्ट्याउने बजेट अन्तर्गत आ.व. २०७५÷०७६ को लागि १३ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रमका शीर्षकमा कुनै बजेट छुट्टयाईको देखिँदैन । यस तर्फका हजारौँ शिक्षकहरू खान सम्म नपुग्ने तलब मासिक ६ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्न अवस्थाको अन्तहुनु पर्ने उनीहरूको माग छ । भने सरकारी तहबाट यो विभेद पूर्ण अन्याय यथाशीघ्र सच्चीनु पर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा समेटिने बालबालिकाहरूलाई खेल्ने, शिक्षण सामग्री तथा उचित बसोबास जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी आकर्षित नभएकामा आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ को ८ औँ संशोधनमा बाल विकाश कार्यक्रम अन्तर्गतका शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई उल्लेख गरिए पनि हाल सम्म नियमावली मार्फत कार्वान्यन हुन सकेको छैन । बाल बालिकाको उज्ज्वल भविष्य र विपन्न वर्गमा शिक्षाको पहुँच वृद्धिकालागि यस तर्फका शिक्षकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पोसाक तथा सुविधा अन्य सरकारी शिक्षक सरह हुनुपर्ने माग राखी सघंर्षमा उत्रिएको जनाईएको छ ।